Nigranee | » ‘वार’ ले चार सातामा कति कमायो ? ‘वार’ ले चार सातामा कति कमायो ? – Nigranee
‘वार’ ले चार सातामा कति कमायो ?
निगरानी October 30, 2019 456
काठमाडौं । एक्शन अभिनेताद्वय ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफको फिल्म वारले बक्स अफिसमा धमाका मच्चाइरहेको छ । वार रिलिजमा आएको आज चौथो साता पूरा भएको छ । फिल्मले चौथो सातासम्म उत्कृष्ट कमाई गरिरहेको छ । अब पाँचौं सातामा पनि फिल्मले राम्रो कमाई गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
गान्धी जयन्तीको अवसरमा दर्शकमाझ रिलिजमा आएको वारले बक्स अफिसमा नयाँ नयाँ रेकर्डहरु कायम गरिसकेको छ । पहिलेको तुलनामा आज (बुधबार) पनि वारले बक्स अफिसमा १ देखि १.२५ करोड रुपैयाँको ब्यापार गर्नसक्छ । तर, आधिकारिक जानकारी भने आइसकेको छैन ।
यस हिसाबले वारको हिन्दी भर्सनले २८ औं दिनमा ३०० करोडको आँकडा पार गर्दै ३००.५० करोडसम्मको कलेक्शन गरेको हुनसक्छ । वारको सबै भर्सनको कुल कमाई ३१६ करोड रहेको छ। गान्धी जयन्तीको अवसरमा रिलिजमा आएको वारले कयौं वर्षको ठूला फिल्महरुलाई पछि पार्दै नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल बनेको छ । यति मात्रै होइन, पद्मावत, सुल्तान लगाएतका फिल्मलाई पछि पार्दै वार हिन्दी फिल्मको सातौं ठूलो फिल्म बनेको छ ।
ऋतिक र टाइगरको वारले बलिउड बक्स अफिसमा मात्रै कब्जा जमाएन, विदेशमा समेत कब्जा जमाउन सफल बनेको छ । यसै वारमार्फत ऋतिक र टाइगरले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गरेका हुन् । यो फिल्ममा ‘कवीर’ ऋतिक रोशन र ‘खालिद’ टाइगर श्रफको कहानीलाई प्रस्तुत गरिएको छ । उनीहरुलाई गुरु र चेलाको भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।